Ahoana ny fanatanterahana backup backup an'ny XFCE amin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fanatanterahana backup backup an'ny XFCE amin'ny Linux?
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha Izaho dia niresaka tamin'izy ireo momba ny fomba ahafahanay manohana ny configurations ataonay ny antsika Tontolon'ny birao LXDEAnkehitriny, anjaranao ho an'ireo mpampiasa XFCE.
Na izany aza misy fitaovana afaka mandeha ho azy ny fizotrany, maro amin'izy ireo raha tsy ny ankamaroany dia mazàna manao backup feno izay tsy ho an'ny tsara indrindra foana io, raha te-hanohana zavatra sasany fotsiny isika.
Ny tsara momba ireo programa ireo dia ny fahafahan'ny maro misafidy izay haverina, na dia indrisy misy tsy hita foana.
anefa Ny tontolon'ny birao XFCE dia mampiasa fitaovana sy teknolojia marobe ary tsy azo aondrana haingana ny fikirana Dconf ho an'ny vahaolana backup tsotra.
Ho an'ireo mitady hamorona backup ho an'ny tontolon'ity birao ity dia mila mamorona iray amin'ny alàlan'ny rafi-drakitra izy ireo.
Raha mitady mamorona bakcup XFCE ianao dia tokony hangeja sy hitahiry ireo rakitra avy amin'ny birao mitsikera mankany amin'ny folder ~ /.config.
1 Mamorona backup XFCE
2 Lohahevitra sy sary masina voafafa
3 Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny mofo XFCE?
Mamorona backup XFCE
Tokony ho ao an-tsain'izy ireo fa ny fisafidianana ny hamerina ny zava-drehetra ao amin'ny fampirimana fampirimana dia hanana toerana betsaka kokoa noho ny famerenana rakitra fotsiny.
Ho an'ity dia hanokatra terminal izahay ary amin'izany dia hanatanteraka ity baiko manaraka ity izahay:
izany mety ho elaela, miankina amin'ny habetsaky ny fampahalalana raketanao.
Rehefa vita ny fizotrany dia efa manana ny fisie tar izay azon'izy ireo tehirizina, afindra na izay rehetra ao an-tsainy hatao amin'izany.
Amin'ny maha-safidy hafa dia azontsika atao ny mamorona kopia voafafa amin'ireo rakitra XFCE. Hanombohana ny fizotrany ao amin'ny terminal dia hanatanteraka ireto baiko manaraka ireto izahay.
Para ny raharahan'ireo mpampiasa Xubuntu dia mila manao hetsika sasany Fanampin'izany dia ny mandika ny fampirimana Xubuntu ao anaty lahatahiry fikirakirana.
mkdir -p ~ / Desktop / xfce-desktop-backup / xubuntu-settings
cp -R ~ / .config / xubunu ~ ~ /
mv xubuntu ~ / Desktop / xfce-desktop-backup / xubuntu-settings
Ya Raha manana ny zava-drehetra amin'ny toerany isika dia hanatanteraka ity baiko manaraka ity fotsiny hamoronana ny fisie rakitra misy ny angona rehetra:
Lohahevitra sy sary masina voafafa
Ahoana no tokony hahalalan'izy ireo koaampahany amin'ny sehatr'asa sy endrika hita eo amin'ny tontolon'ny birao ny lohahevitra sy sary masina, hahafahantsika manao ny backup ireo amin'ireto fomba manaraka ireto.
Tokony ho fantatr'izy ireo fa misy lalana roa mety hasiana itahirizana azy ireo, ary ny tena fahita dia ilay ao anatin'ny "/ usr" folder ao amin'ny fakan'ny rafitra fisie. Toerana iray hafa ananan'ny mazàna azy io dia ao anatin'ny fampirimana manokana ao amin'ny "/ trano".
Ampy izy ireo mitady ny lahatahiry ary izay misy ny fampirimana dia haverin'izy ireo.
/ usr / share / sary masina y / usr / fizarana / lohahevitra na in ~ / .icons y ~ / .tema.
Ya fantaro ny lalana itehirizan'ny sary masina sy ny loha-hevitrao, manaova fotsiny izao baiko manaraka izao soloina ny "lalana" amin'ny làlana izay nitahirizanao ny nomaniny ho solon'izay:
Ary satria ao anaty rakitra TarGZ ny lohahevitra sy ny kisary rehetra, dia vita ny backup ary azonao atao ny manangona ireo rakitra voahidy ao anaty rahona, USB mankany amin'ny kapila mafy hafa na izay ao an-tsainao hatao amin'izy ireo.
Vantany vao vita ny backup, azonao atao ny manova ny rafitra, mampita ny fikirana amin'ny solosaina hafa, mizara izany na izay tianao atao amin'izany.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny mofo XFCE?
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny data fotsiny avy eo amin'ny terminal hanatanteraka ireto baiko manaraka ireto izahay:
O ho an'ny tranga famerenana amin'ny laoniny XFCE fotsiny:
Y farany ho an'ny raharaha lohahevitra sy sary masina miaraka amin'i:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fanatanterahana backup backup an'ny XFCE amin'ny Linux?
lavitra loatra, mampiasa MX Linux aho izay manana fitaovana manokana hamoronana ISO custom backup. Ampiasao ny birao XFCE. Amin'ny distro hafa azo avy amin'ny Ubuntu, azonao ampiasaina ny Pinguy Builder, miasa tsara koa izy io hamoronana sary ISO nomaniny ho solon'izay. Nampiasako izany hatramin'ny vao tsy ela akory izay tao amin'ny Xubuntu 18.04, saingy nankany amin'ny MX Linux 17.1 aho, mahavariana, manana fitaovana maro hafa ho an'ny mpampiasa izy io ary mifototra amin'ny DEBIAN Stable ihany koa.
Fernando Rodriguez dia hoy izy:
Marina, mampiasa mx16 BY THE SERVER napetraka ihany koa aho ... fa mizara ny marin-toerana sy ny hazavana ary ny hamafin'ny fananganana an'ity distro ity, saingy mendrika ny fampiharana, ny fahalalana ny firafitry ny XFCE. misaotra amin'ity lahatsoratra ity.
Valiny tamin'i Fernando Rodriguez
Ahoana ny fomba hamerenanao ny sehatr'asa Mate desktop?
Ny tetik'asa SC Controller dia misy vaovao sy kinova vaovao